SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Mauritian Creole Maya Mongolian Myanmar Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zulu
Vamwe vanhu havana chokwadi kuti nyaya yaDhavhidhi naGoriyati yakanyatsoitika here. Ndizvo zvawambofungawo here pawanga uchiverenga nyaya yapfuura? Kana wakambofunga kudaro, ona mibvunzo mitatu inotevera.
1 | Kune munhu angareba mamita 2,9 here?
Bhaibheri rinoti Goriyati ainge akareba “makubhiti matanhatu nepanoyerwa neminwe ikatambanudzwa.” (1 Samueri 17:4) Kubhiti riri kutaurwa raiva masendimita 44,5 uye minwe yacho kana yakatambanudzwa yaiva masendimita 22,2. Tikabatanidza urefu uhwu tinowana mamita 2,9. Vamwe vanoramba kuti Goriyati ainge akareba kudaro, asi chimbofunga izvi: Mazuva ano, munhu akaonekwa kuti akareba kupfuura vose ainge akareba mamita 2,7. Goriyati aiti pfuurei munhu uyu nemasendimita anoda kusvika 20. Goriyati aiva werudzi rwevaRefaimu, uye varume verudzi urwu vaiva mazimhitsa. Chimwe chinyorwa chekuma1200 B.C.E. chakawanika kuEgypt, chinotaura nezvevamwe varwi vaityisa vemuKenani vainge vakareba mamita anopfuura 2,4. Saka nyaya yaGoriyati haingarambiki.
2 | Ichokwadi here kuti kwaiva nemunhu ainzi Dhavhidhi?
Vaongorori vakamboedza kutaura kuti Mambo Dhavhidhi aingovawo munhu aitaurwa mungano, asi havana kubudirira. Vanoongorora matongo vakawana chimwe chinyorwa chekare chaitaura “nezveimba yaDhavhidhi.” Uyewo, Jesu Kristu akaratidza kuti Dhavhidhi munhu chaiye akatomborarama. (Mateu 12:3; 22:43-45) Kuti tizive kuti Jesu ndiye Mesiya, tine nhoroondo mbiri dzinoratidza kuti akabva nemudzinza raMambo Dhavhidhi. (Mateu 1:6-16; Ruka 3:23-31) Zviri pachena kuti Dhavhidhi munhu chaiye akatombovako.
3 | Nzvimbo yaakarwa naGoriyati iriko zvechokwadi here?
Bhaibheri rinoti vakarwisana muBani reEraa. Uye rinototaurawo kuti vaFiristiya pavakauya kuzorwa vaigara mugomo raiva pakati pemaguta maviri, Soko neAzeka. Uye vaIsraeri vainge variwo mune rimwe gomo ranga riri kumhiri kwebani iri. Ichokwadi here kuti kwaiva nenzvimbo dzainzi Soko neAzeka?
Chimboona zvakataurwa nemumwe munhu akashanya kunzvimbo iyi: “Munhu aitiratidza nzvimbo iyi, akatiendesa muBani reEraa, asi haanei nezvokunamata. Takakwira pamusoro perimwe gomo. Tiripo, takabva taona bani, akati tiverenge 1 Samueri 17:1-3. Tapedza, akabva anongedza mubani racho achiti: ‘Nechekuruboshwe rwenyu, ndiko kune matongo eguta rainzi Soko.’ Akabva azoti, ‘Nechekurudyi rwenyu uko, ndiko kwaiva neAzeka. VaFiristiya vakanga vari pakati pemaguta maviri aya, nechemujinga megomo ramakatarisa. Saka gomo ratiri ndiro rinogona kunge raiva nevaIsraeri.’ Ndakabva ndafungidzira Sauro naDhavhidhi vakamira pandakanga ndiri. Takazodzika mugomo, tikayambuka rukova rwakanga rwuri mubani, asi rwaiva rwusina mvura yakawanda, uye rwaiva rwuzere nematombo. Ndakaita senge ndiri kuona Dhavhidhi achinhonga matombo 5, uye rimwe racho richizouraya Goriyati.” Vashanyi vakawanda vanoshamiswa chaizvo pavanoona kuti zvinotaurwa neBhaibheri ndezvechokwadi.
Hapana chingamboita kuti munhu afunge kuti zvinotaurwa munyaya iyi manyepo. Vanhu vanotaurwamo uye nzvimbo dzacho, zvinhu zvechokwadi. Uye chinotokosha zvikuru ndechekuti inyaya yakafemerwa muShoko raMwari, saka inobva kuna Mwari anotaura chokwadi uye “asingamborevi nhema.”—Tito 1:2; 2 Timoti 3:16.